बेलारूस: रूसी भाडामा लिने poll `आतंक '' षडयन्त्रका लागि पोल! - टेली रिले
बेलारूस: "आतंक" षड्यन्त्रका लागि रूसी भाडामा लिने सर्वेक्षण!
बेलारुसले राष्ट्रपति मतदान भन्दा अघि पक्राऊ परेका रुसी भाडावाट गर्नेहरूद्वारा योजना गरिएको "आतंकवादी कार्य" को आपराधिक अनुसन्धान खोल्यो।
बेलारुसले योजना गरेको "आतंकवादी कार्य" मा आपराधिक अनुसन्धान खोलिएको छ रसियन भाडाहरू राष्ट्रपति चुनाव अघि पक्राउ, थप कि उहाँ दर्जनौं ट्र्याक थियो।
बुधवार देशको सुरक्षा सेवाहरूले Russian२ रसियन लडाकूको एउटा समूह र अर्कै मानिसलाई अर्कै ठाउँमा पक्राउ गरेको छ।
बेलारसियाली सुरक्षा परिषदका प्रमुख, आंद्रेई राभकोभले बिहीबार भने कि आपराधिक अनुसन्धान सुरु भएको थियो र ती व्यक्तिलाई "आतंकवादी कार्य" तयार गरेको आरोप लगाइएको थियो।
“Th Th जना पक्राउ परे; त्यहाँ क्षेत्र (बेलारुसको) मा २०० भन्दा बढी छ "राभकोभले भने।
उनले भने कि अरुलाई खोज्न "खोजी भइरहेको छ", उनले गुनासो गरे "यो घाँसको जुलामा सुई खोज्नु जस्तै" थियो।
बेलारुसका केजीबी सुरक्षा सेवाका अनुसार पक्राउ परेका व्यक्तिहरू वाग्नर ग्रुपका सदस्य थिए जुन रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमीर पुतिनको सहयोगी रहेको र यो युक्रेन, सिरिया र मस्कोको हितको रक्षा गर्ने निजी सेना रहेको छ। लिबियामा।
पक्राउहरू अगस्ट9को राष्ट्रपति चुनावअघिको हो जसमा शक्तिशाली अलेक्ज्याण्डर लुकाशेन्को छैठौं कार्यकालका लागि भाग लिइरहेका छन्।
लुकाशेन्कोले विपक्षी उम्मेद्वार र उनीहरूका समर्थकहरुलाई पक्राउ गर्यो।
9,5 million लाख जनताको देशभरमा विरोध प्रदर्शन भयो, political 37 बर्षे राजनीतिक नौसेना स्वेतलाना टिखानोव्स्काया द्रुत रूपमा लुकाशेन्कोको प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी भए।
लुकाशेन्कोले आफ्ना केही आलोचकहरूलाई मस्कोमा "कठपुतली" द्वारा नियन्त्रित गरेको आरोप लगाए।
राभकोभले तिखानोभस्काया लगायत लुकाशेन्को विपक्षी उम्मेदवारहरूसँग भेट गरेपछि उनीहरूलाई चेतावनी दिए कि जुलुसमा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइनेछ।
पछि, सरकारी स्वामित्वमा रहेको बेल्टा न्युज एजेन्सीले रिपोर्ट गरे कि बेलारूसी अधिकारीहरूले तिखानौस्कायाका पतिले रूसी समूहसँग सम्बन्ध राख्न सक्ने विश्वास गरे र दंगा भड्काउने शंकामा उनको विरुद्ध आपराधिक कारवाही शुरु गरे।
बेल्टाले भनेका छन कि "चुनाव अभियानको क्रममा अस्थिर हुनको लागि बेलारुसमा २०० लडाकुको आगमनबारे अधिकारीहरूले सूचना प्राप्त गरेका थिए"।
बुधवार आफ्नो सुरक्षा परिषद्को आपतकालीन बैठकमा लुकाशेन्कोले मस्कोबाट स्पष्टीकरणको माग गरे।
"यदि तिनीहरू दोषी छन् भने मर्यादाका साथ यस अवस्थाबाट बाहिर आउनु आवश्यक छ," लुकाशेन्कोले टेलिभिजनमा भने।
बेलारुसका लागि रसियन राजदूत दिमित्री मेजेन्टसेभले बिहीबार बिहान बेलारुसको विदेश मन्त्रालयमा उनलाई यस विषयमा छलफल गर्न आमन्त्रित गरिएको जानकारी दिए।
क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेसकोभले भने कि पक्राउ गरिएको रसियनको बारेमा मस्को बेलारसबाट पूर्ण विवरण चाहन्छ र उनीहरूको अधिकारको पूर्ण सम्मान हुने आशा राख्छ।
मस्कोमा पेस्कोभले भने, "उनीहरूले गरेका अवैध गतिविधिहरूको बारेमा हामीलाई कुनै जानकारी छैन।" “हामी जानकारी पाउन आशा गर्छौं जसले हामीलाई यो समस्या समाधान गर्न सक्षम गर्दछ। "
पेसकोभले भने कि रसियामा पनि यस्तै वर्णनका धेरै बेलारूसी पुरुषहरू थिए तर मस्कोले उनीहरूले कुनै पनि अवैध काम गरिरहेको अनुमान गरेनन।
बिहीबार पनि बेलारुस र युक्रेनले आफ्नो सीमा नियन्त्रणलाई सुदृढ पार्न र गिरफ्तार भएपछि सीमा सहयोग विस्तार गर्ने कुरामा सहमति भएको बेलारुसको विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ।
यो कदम दुई देशलाई अस्थिर बनाउन कुनै पनि प्रयास रोक्न लक्षित छ, बेलारूसी मन्त्रालयले एक बयानमा भन्यो मेजेन्टसेभ र बेलारुसका लागि कार्यवाहक यूक्रेनी राजदूत।
स्रोत: https: //www.aljazeera.com/news/2020/07/bebas-probes-rશિયન-mercenaries-terror-plot-200730092717064.html
स्विजरल्याण्ड: फीफा बॉस इन्फ्यान्टिनोको विरुद्ध फौजदारी कार्यवाही खोलियो
केएलएमले १,1500०० नयाँ छाडाहरूको घोषणा गरी २०% लाई रोजगार कटौती गर्नेछ।
La Résidence des Ambassadeurs du Cameroun en France vidée de ses occupants illégaux !